Izimfuneko zokuvikeleka komsebenzi wokuqapha ziyimininingwane ebalulekile bonke abalindi okufanele bazi. Abasebenzi abangena kumlindi kumele bakwazi ukuphatha izikhali kanye nezinhlamvu, kanye nokwazi imithetho ejwayelekile yokuphepha lapho beyisebenzisa.
Amazwi ambalwa ngezikhali
Izidingo zokuphepha zomsebenzi wokuqapha ziphoqa bonke abalindi ukuba bathathe isibhamu. Ngesikhathi esifanayo, ukushaja nokukhishwa kwayo kufanele kwenziwe ngokuqinile emthethweni, ezindaweni ezikhethiwe ngokukhethekile kule njongo.
Isikhali kufanele ngaso sonke isikhathi sibe ngaphansi kokuqondiswa okuqinile kwenhloko yomlindi. Ngaphandle kwalokho angeke athathe isibhamu ngaphandle kwemvume yakhe. Izikhali zokuhlanza kufanele zenziwe ezindaweni ezikhethiwe ngokukhethekile lokhu, futhi ngaphansi kokuqondiswa kwenhloko yomlindi noma iphini lakhe.
Izimfuneko zokuphepha zengxelo yesevisi yokuqapha ukuthi ukuthunyelwa ngalunye kufanele kuhlonywe izikhungo zokuxhumana, izithiyo zobunjiniyela ezikhethekile, kanye nokukhanyisa nokubonisa.
Ngesikhathi esifanayo, indlu yokulinda ngokwayo, zonke izikhala kanye nezinto ezivikelwe kumele zibe nemishini yokulwa nomlilo.
Imithwalo yemfanelo yomthumeli
Izidingo zokuphepha zomsebenzi wokuqapha ziphoqelela zonke ihora ukubika bonke abantu abasolisayo nabangagunyaziwe, kanye nezibonakaliso zokungena kanye nokungena endaweni evikelekile.
Kungumsebenzi wabalindi ukuvimbela abangaphandle ukuba basondele ibanga elikhonjisiwe emakhadini okubika.
Uma, endaweni yeposi, umuntu ovela ngaphandle, ubonwayo kufanele amvimbele ngokumemeza kwakhe futhi amvimbele ukuba afike ibanga elifanele ukuhlasela okuzungezile.
Izidingo zokuphepha uma uphatha umsebenzi wokulinda unqande umlindi ukuthatha noma yiziphi izinto kubantu abangagunyaziwe, futhi avumele ukubukeka kwezinto ezingaziwa endaweni evikelekile.
Phakathi nokuhamba ngendlela ekhethiwe, umqaphi kufanele ahlole ngokucophelela insimu, ngenkathi eqalaza futhi ebuka isayithi esanda kudlula. Kubalulekile ukulalela yonke imisindo kanye nezigqoko ebusuku.
Imfuneko yokuphepha lapho kwenziwa umsebenzi wokuqapha uMnyango Wezimo Eziphuthumayo kubonisa ukuthi abathunywa akufanele bafihlwe ensimini eyabelwe. Zonke ukunyakaza kumele zivulekele.
Yini evunyelwe umthumeli
Izidingo zokuphepha zomsebenzi wokuqapha abasebenzi zivimbela ukuthunyelwa eduze kwezakhiwo nemithi yodwa ngesikhathi sezulu. Futhi umthumeli akanalo ilungelo lokusondela eduze kwezintambo eziphukile, futhi nokuthinta imigqa yamandla.
I-Sentry iyadingeka ukuba ihambisane nemithetho yokuvikelwa kwabasebenzi, kanye nezindinganiso ezidingekayo zokuhlanzeka ezidingekayo ebhizinisini elithile.
Ezinye izici zesevisi yokuqapha
Uma umlindi eqapha indawo lapho uphethiloli we-rocket, izinhlayiya ezinobuthi noma ezinye izinto eziyingozi zigcinwa, khona-ke kufanele zinikezwe izinto ezidingekayo zokuzivikela. Ngesikhathi esifanayo umlindi kumele abe namakhono okuthola izimpawu zokutheleleka kwendawo. Kulesi simo, umsebenzi womthumeli uhlanganisa nokukwazi ukusebenzisa imishini yokuzivikela futhi ukwazi ukuhlinzeka ngosizo lokuqala kubantu abalimele.
Phakathi nesevisi yabathumeli endaweni yabo yesevisi noma ngenkathi kushintshwa abasebenzi, abasebenzi kumele bagcine isikhali singakhululwa ngenkathi sibambe phakathi kwamadolo. Hlala phansi uphume emotweni kungaba ngumyalo othize wenduna noma umsizi wakhe. Ngesikhathi esifanayo, ungakwazi ukuhambisa abagibeli kuphela emotweni ekhethekile. Kuvinjelwe ngokuphelele ukusebenzisa ezinye izimoto.
Uma ungasebenzisa izikhali ngaphandle kokuxwayisa
Umlindi unelungelo lokusebenzisa isikhali sakhe ngaphandle kokuxwayisa lapho kwenzeka ukuhlaselwa kwento evikelwe noma kumlindi uqobo. Kuzo zonke ezinye izimo, isibhamu singasetshenziswa kuphela ngokuhambisana nezidingo ezisemthethweni.
Uma abasebenzi bevikela amasitoreji ngezinhlamvu, izinto ezinokutsha noma zamakhemikhali, umlindi kufanele aqaphele ngokucophelela ukuthi i-cartridge iye yafakwa endaweni yokugcina.